Posted by admin on June 16th, 2013 ऋषिराज बराल
नेपाली क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्ने प्रचण्ड–बाबुराम गुटसित सम्बन्ध विच्छेद गरेको एक वर्ष भएको छ । अहिले पनि विसर्जनोन्मुख नवसंशोधनवादी सारमा नवप्रतिक्रियावादी गुट अनेक भ्रम फैलाइरहेको छ । भित्रभित्रै यो गुट कसरी वैचारिक र साङ्गठनिक रूपबाट नेकपा–माओवादीलाई सिध्याउने भनेर लागेको छ भने बाहिरचाहिँ एकता र मित्रताको षड्यन्त्रकारी भ्रम फिँजाइरहेको छ । अमुकलाई अमुक पद र अमुकलाई अमुक मन्त्रीको पोर्टफोलियो वितरणको ठेककापट्टाकेन्द्र अहिले पेरिस डाँडा भएको छ । नवशंसोधनवादीहरू भारतीय विस्तारवादका सामु पूर्ण आत्मसमर्पण गरेर पैसा, पद र प्रलोभनका अनेक ढडिया थापेर बसेका छन् । सुनको बाला समातेको बाघप्रति लोभिएको लोभी बाहुनझैँ ‘शान्तिप्रक्रिया’ का सुखसुविधा अझै पनि झल्झली सम्झिरहनेहरू पेरिस डाँडाले वितरित गर्न थालेको कोटातिर आकर्षित नहोलान् भन्न सकिन्न । तर नेकपा–माओवादी क्रान्तिकारीहरूको पार्टी हो, यो महान् सहिदहरूको रगतको मूल्यप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो, यो दुस्मनका कुनै पनि चाल र जालमा पस्तैन र फस्तैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । अपारदर्शी क्रियाकलाप अथवा कार्यकर्ताको आँखा छलेर दायाँवायाँ गर्ने प्रवृत्तिका लागि नेकपा–माओवादीमा ठाउँ छैन । कार्यकर्ताले हरेक नेताका गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ हेरेर खबरदारी गरिरहेका छन् । ‘गद्दारहरूसित एकता संभव छैन’ भनेर भर्खरै कमरेड किरणद्वारा प्रसारित वक्तव्यले क्रान्तिकारी कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । देशभित्रका नयाँ–पुराना प्रतिक्रियावादीहरू मात्र नभएर साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादी शक्तिहरू पनि नेकपा–माओवादीलाई भरिसक्के वैचारिक रूपबाटै पतन गराउने, सहमतिका नाममा संसदवादको आहालमा डुबाउने, नभए दमन गर्ने अथवा टुट–फूट र विसर्जनको स्थितिमा पुर्याउने अनेक षड्यन्त्रमा छन् । चुनावलाई पनि उनीहरूले यसैको एउटा कडी बनाउन खोजेका छन् । प्रश्न हामी आफैँसित पनि गाँसिएको छ । उद्देश्यमा प्रस्ट र विचारप्रति प्रतिबद्ध रहँदारहँदै पनि कतिपय सन्दर्भंमा हाम्रो चिन्तन र व्यवहारमा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएको कुरा सत्य हो । विरोधीहरूलाई खेल्ने ठाउँ हामी आफैँले दिएका छौँ । खासगरेर सङ्गठन, कार्यदिशाको कार्यान्वयन र कार्यशैलीका क्षेत्रमा हाम्रा सामु थुप्रै चुनौती र जटिलता देखापरेका छन् । सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने कामहरू गतिमा हुन सकेका छैनन् र महाधिवेशनको स्पिरिटबाट कतै हामी पछि हट्न थालेको त होइनौँ ? जस्ता आशङ्काहरू उठ्न थालेका छन् । विचार र सङ्गठनका क्षेत्रमा नवसंशोधनवादीहरूसित सम्बन्ध विच्छेद् गरे पनि लामो अवधिसम्म तिनीहरूसितको सङ्गतले गर्दा त्यो विरासतबाट हामी मुक्त हुन नसकेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ । नयाँ पार्टीका रूपमा विचार, नेतृत्व, सङ्गठन र आन्दोलनका क्षेत्रमा आफ्नो परिचयलाई गुणात्मक रूपमा स्थापित गर्नैपर्ने हुन्छ । आमजनता, हाम्रा शुभचिन्तकहरू र कार्यकर्ता पङ्क्तिबाटसमेत हामीप्रति उठाउन थालिएका प्रश्नहरूको जवाफ, कुरा वा भाषणले होइन, वर्गसङ्घर्षलाई घनिभूत रूपमा अघि बढाएर मात्र दिन सकिन्छ । पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा आफूलाई दृढताका साथ उभ्याएको छ । सैद्धान्तिक तहमा क्रान्तिका ‘तीन जादुगरी हतियार’ प्रति पार्टी प्रस्ट छ तापनि यति मात्र पुग्दो छैन । हामी आफैँप्रति निर्मम भएर जान सक्ने हो कि होइन, प्रश्न यहाँनेरी छ । कार्यदिशा, सङ्गठन, नेतृत्वबीच तालमेल मिल्नैपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्तिलाई क्रान्तिकारी उत्साह र आशाका साथ अघि बढ्ने वातावरणबिना नीति र योजना पारित गरेर मात्र पनि केही हुने स्थिति छैन । देखिने गरी नै तल चाहिँ कुदन तयार भएको र माथिचाहिँ हिँड्न पनि तयार नभएको जस्तो स्थिति बोध हुने अवस्था आउनु हुँदैन । उमेरवाद र अनुभववादसित जोडिएका समस्याहरूले पनि यदाकदा टाउको उठाउन थालेको बोध हुन्छ । अनुभववादी जडता र उमेरवादी वितण्डा दुवै स्वीकार्य छैनन् । वस्तुस्थितिको विशिष्टताका नाममा अकर्मण्यतामा फस्ने र त्यसको विरोधमा अराजकतामा रमाउने कुरा सही होइनन् । दस्ताबेजमा उल्लेख भएझैँ आज अनुभववाद, व्यवहारवाद र उदारतावादका विरुद्ध मात्र नभएर पार्टीभित्र बेलाबेलामा देखापर्ने गरेका विभिन्न किसिमका व्यक्तिवादी अराजकतावादका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष चलाउनु आवश्यक छ । अबको हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रमको मूल केन्द्र ‘चार तयारी’ हुनु आवश्यक छ । दुस्मनका हरेक भ्रम र षड्यन्त्रलाई चिर्दै क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो पार्टीमा वर्गसङ्घर्षमा लामो अनुभव भएको र खारिएको पाको नेतृत्व टिम छ र जनयुद्धका बीचबाट विकसित क्रान्तिकारी उत्साहले भरिएको सशक्त युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको जमात छ । यो शक्ति पार्टीको महत्वपूर्ण सम्पति हो । यसलाई क्रान्तिकारी संयोजनका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसको सही किसिमले पार्टीमा व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । माओले भन्नुभएझैँ नेतृत्वका सन्दर्भमा ‘एकमा तीन’ को नीति नै सही नीति हो । पार्टीमा गुटवाद, क्षेत्रीयतावाद, जातवाद÷जातीयतावाद, लिङ्गवाद र प्रभाववाद सबै त्याज्य छन् । पार्टीमा कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी पाउनु पर्दछ, नेतृत्वदेखि तलसम्म ‘सही मान्छे सही ठाउँ’ मा उभिएको हुनुपर्छ भनेर मार्क्सवादको क ख ग बुझेको सबैले जानेको कुरा हो । यसमा सहमति जनाउनु अथवा स्वीकार्नु भनेको यसको व्यवहारमा अनुभुति हुने स्थितिको निर्माण हो । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या देखिएको कुरा सही हो । क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशाको केन्द्रीयतामा एकताबद्ध सुदृढ पार्टीको निर्माणतर्फ जाने कि अनुभववादी जडता र अकर्मण्यतामा पार्टीलाई घुमाइरहने भन्ने कुरासित अहिलेका समस्याहरू जेलिएका छन् । ‘विशिष्ट स्थिति’, ‘सङ्क्रमणअवस्था’, ‘आफ्नै मौलिकता र विशिष्टता’, ‘हिजोभन्दा फरक किसिमले’, ‘क्रान्तिको बाटो घुमाउरो हुन्छ’ आदिआदिका नाममा हिजोका दिनमा यथास्थितिमै रुमलिएको इतिहासबाट शिक्षा लिने कि नलिने प्रश्न आजको जल्दोबल्दो प्रश्न हो । विशिष्टता, मौलिकता र मोडेलका नाममा कतिपय क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पतनको दिशा समातेको ऐतिहासिक यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ । यथास्थितिमा लामो समयसम्म पार्टी रुमलिइरहनु भनेको विभिन्न किसिमका अवसरवादी प्रवृत्तिलाई विकसित हुने अवसर प्रदान गर्नु हो । यसले अराजकतावाद र अकर्मण्यतालाई मात्र मलजल प्रदान गर्दछ । यो भनेको अन्ततः विसर्जन वा फूटतर्फ पार्टीलाई प्रवृत्त गराउनु हो । अधैर्यता र उत्ताउलोपानबाट जोगिनु आवश्यक छ, व्यक्तिवादी, महत्वाकाङ्क्षी र क्यारियरिस्ट प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा अनुभववादी जडता र अकर्मण्यतामा फसेर यथास्थितिवादको पक्षपोषण गर्नु भनेको नेपाली क्रान्तिलाई अर्को किसिमले धोका दिनु मात्र हो । रेग्मी सरकारले चुनाबको मितिको घोषणा गरिसकेको छ । यो समझदारी बिगार्ने कुरा मात्र होइन, यो भनेको मुठभेड, द्वन्द्व सारत: एक प्रकारले युद्धकै घोषणा हो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय योजनाबद्धतामा आधारित भएर चुनाब गर्न थालिएको छ, यो सामान्य स्थिति होइन । यो सामान्य वा कोरा बहिष्कारले मात्र पुग्ने स्थिति होइन । यो एक किसिमको वर्गयुद्धकै प्रश्न हो । यो भनेको चुनावी प्रक्रियालाई नै असफल अर्थात् ध्वस्त पार्नु पर्ने स्थिति हो । २०५२ सालमा रोल्पाली जनताले रोमियो अप्रेसन भोगेका थिए, त्यो एक हिसाबले महान् जनयुद्धको रिहर्सल थियो– प्रतिरोध र सङ्घर्ष । चुनावी मुठभेडमा अब नयाँ किसिमका रिहर्सलहरू हुने कुरा निश्चित छ । ‘पोलिटिक्स इन कमाण्ड’ मार्फत ‘चार तयारी’ लाई केन्द्रमा राखेर वर्गसङ्घर्षलाई नयाँ किसिमले गति दिएर मात्र यसको सामना गर्न सकिन्छ । यही नै मार्क्सवादी बाटो हो, महाधिवेशनले निर्देशित गरेको बाटो हो । माओले बारंबार भन्नुभएझैँ जनसेना नभएको जनतासित आफ्नो भन्ने केही हुँदैन । यस यथार्थलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । ०००
Posted in Politics « पार्टीविरुद्ध पार्टीका माध्यमहरू: कुरा नयाँ पार्टीको
Sheela says:	July 3, 2013 at 7:34 am	The following analysis is objective and every one on the CPN-M should be serious on this objective fact of the present:
…….‘विशिष्ट स्थिति’, ‘सङ्क्रमणअवस्था’, ‘आफ्नै मौलिकता र विशिष्टता’, ‘हिजोभन्दा फरक किसिमले’, ‘क्रान्तिको बाटो घुमाउरो हुन्छ’ आदिआदिका नाममा हिजोका दिनमा यथास्थितिमै रुमलिएको इतिहासबाट शिक्षा लिने कि नलिने प्रश्न आजको जल्दोबल्दो प्रश्न हो । विशिष्टता, मौलिकता र मोडेलका नाममा कतिपय क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पतनको दिशा समातेको ऐतिहासिक यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ । यथास्थितिमा लामो समयसम्म पार्टी रुमलिइरहनु भनेको विभिन्न किसिमका अवसरवादी प्रवृत्तिलाई विकसित हुने अवसर प्रदान गर्नु हो । यसले अराजकतावाद र अकर्मण्यतालाई मात्र मलजल प्रदान गर्दछ । यो भनेको अन्ततः विसर्जन वा फूटतर्फ पार्टीलाई प्रवृत्त गराउनु हो Many thanks Com. Baral
Dilip kumar thapa says:	July 3, 2013 at 9:30 am	Dr Rishi raj sir ko article haru bela belama paya samma ma padhne garchhu. Uhanko bishlesan nikai satik lagchha. Ho sanchchai Aaja nepali janabadi krantile peru pachhiko arko thulo dhakka khayako chha.r jata katai annewolta ra akarmanyata chhayako chha.Gaddar haru sanga ali dhilai bhaya pani sambandha bichchhed gari krantiko margalai khula gariyakai chha. Aba mahan darshanik k. Maole bhane jhai “bichar dharatmak karya disha sahi ya galat hunule sabghok ko nirdharan gardchha. Yadi parti ko bichar……” thos paristhiti ko thos bishlesan gari jana disha taya gari 4tayarima jutnadhilai garnu hundaina. Nava samsodhan badi wa prati kriya badi haruko sabai sadyantra harulai destroy pari Nepali janabadi kranti marga khula garna aba sabaile kammar kashaun.